mugabe: Top Botswana News - NewsHub
1-10 results from 490 for query «mugabe»
Government will continue prioritising the welfare of Chiefs and according them respect as custodians of Zimbabwe's land and customs, President Mugabe has said. The Head of State and Government and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defence Forces said this yesterday at the National Council of Chiefs Conference in Bulawayo. In his address to the country's 316
October 27, 2017 11:53 PM Zimbabwe's opposition leader Tsvangirai back in SA hospital
Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai is back in a South African hospital for a medical review, nearly two weeks after he returned home from that country, his spokesman said on Friday, denying reports that he was critically ill. Tsvangirai, who suffered severe vomiting after a party meeting and was in September airlifted to a Johannesburg hospital 72
October 18, 2017 2:23 AM Zimbabwe bans fruit, vegetable imports as forex crunch deepens
Most imports are from South Africa. Zimbabwe banned fruit and vegetable imports on Tuesday to preserve its dwindling reserves of hard currency, drawing immediate warnings of food shortages. The order, which followed a ban on maize imports in June, alarmed retailers and street dealers in the capital Harare who get much of their produce from neighbouring 43
DESPITE their ideological differences, Botswana President Ian Khama and his Zimbabwean counterpart Robert Mugabe appear to have been hewn from the same block, in as far as their negative perception of the media is concerned, the Media Institute of Southern Africa (Misa) has revealed in its latest report. The two leaders have allowed their administrations 28
October 9, 2017 4:00 AM UDC, expert vindicated by Mugabe’s words on Khama
Mugabe attacked Khama, accusing him of not supporting the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Pelonomi Venson- Moitoi’s bid for chair of the African Union (AU) Commission. Mugabe was speaking during the recent Zimbabwe-South Africa Bi-National Commission (BNC). Over the years opposition parties have been complaining about Khama’s 39
October 6, 2017 7:00 AM Botswana government hits back at Mugabe
Gaborone – Botswana’s government this afternoon hit back at Zimbabwe’s 93 year old leader Robert Mugabe regarding comments he made about their President Ian Khama, and Botswanaâ€™s Foreign Minister, Dr. Pelonomi Venson-Moitoi. Attending bilateral talks in South Africa, Mugabe had said Venson-Moitoi lost her bid to become chairperson of the African Union 33
PRESIDENT Ian Khama’s government has taken umbrage at President Robert Mugabe’s snide remarks about the Botswana leader but said in a cheeky formal response Thursday it will not confront the 93-year-old leader because of his advanced age. Addressing a Bi-national Commission he co-chaired with South African President Jacob Zuma this week, President Mugabe 37